Maxaa U Qabsoomay Guddiga Loo Xil-saaray Arrinta GEDO? - Caa... » Axadle Wararka Maanta
Maxaa u qabsoomay guddiga loo xil-saaray arrinta GEDO? – Caa…
Gabahaarey (Axadle) – Guddiga dib u heshiisiinta ee loo magacaabay arrinta gobolka Gedo, kadib shirkii golaha wada-tashiga qaran ayaa shaaciyey inay soo gabagabeeyeen dadaalladii ay ka wadeen degmada Garbahaarey ee xarunta gobolkaasi.
“Guddiga Doorashooyinka qabanaya, Ergada iyo cid waliba oo imaaneysa Garbahaarey waxa aan kuso dhaweyneynaa gacmo furmo waana kala shaqeyneynaa fulinta heshiisyadii Doorashooyinka Dalka” ayuu yiri Guddoomiye Axmed Buulle Gareed.
Hadalkan ayaa kus oo aadaya, xilli muhiim ah oo lagu dhawaaqay sida ay u dhacaan doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.